Ny utopia ny fampitambarana ao amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Nisy resaka efa ela momba ny fampitambatra, momba ny fampiraisana ny solosaina birao amin'ny finday. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy hiresaka momba izany fampitambarana izany aho, raha tsy momba ny fampifangaroana ny fizarana Linux, ilay solosaina kely 1% eran-tany izay mampiasa azy.
AppImages dia rakitra azo tanterahina izay misy ny fiankinan-doha amin'ny programa resahina. Ity dia fomba iray tsy ara-potoana amin'ny fikirakirana fiankinan-doha saingy tena ilaina tokoa satria tsindrio fotsiny ny programa ary mandeha izy io.
Raha te hanana ohatra haingana dia haingana dia afaka maka ny Krita izay azo alaina avy amin'ny tranokala ofisialiny https://krita.org/es/descargar/krita-desktop-es/ ao amin'ny kiheba Linux.
Tranonkala ofisialin'i Krita
Aorian'ny fisintomana ny rakitra .appimage avy amin'ny pejy, ataontsika azo tanterahina ny fisie, azo atao amin'ny sary izany, miaraka amin'ny mpitantana ny rakitra tianao, tsindrio havanana ary ataovy azo tanterahina izany.
Tsindrio indroa fotsiny izao ary hihazakazaka ny programa, satria hitanao fa mamorona sary kely an'ny programa ary manampy azy amin'ny rakitra.
Ao amin'ny tranonkala ofisialy https://appimage.org/ misy fampahalalana bebe kokoa.
Tranonkala ofisialy Flatpak
Flatpaks dia fonosana misy tahiry ary azo apetraka avy eo, izay mahatonga ity safidy ity ho maivana kokoa noho ny Appimages, satria ny Flatpaks dia manana fotoana maharitra, andiana fonosana izay iankinan'izy ireo afaka manomboka ny programa. Amin'ny teny fohy dia misy ny fiankinan-doha takiana. Mamonjy antsika avo roa heny ny habaka takiana, ankoatry ny fahazoana filaminana amin'ny alàlan'ny fitazonana ny fotoana maharitra ho an'ny programa misy anay sy ny patch tsirairay avy.
Ny fametrahana azy dia tsy mitovy amin'ny fizarana Linux samihafa, avelako ny rohy https://flatpak.org/getting mba tsy hamerenana ny atiny.
Ary mba hahitana rindranasa dia misy trano fitahirizana antsoina hoe Flathub izay manana rindranasa marobe sy ireo vanim-potoana mety aminy.
Aorian'ny fametrahana Flatpak dia manoratra izahay hametraka ohatra iray avy amin'ny Flathub Solitaire
apetraho flatpak - Avy amin'ny https://flathub.org/repo/appstream/org.gnome.Aisleriot.flatpakre
Fametrahana fampiharana amin'ny flatpak
Hangataka amintsika ny tenimiafintsika faka mba hahafahantsika mametraka azy miaraka amin'ny vanim-potoana tsirairay avy.
Mametraka Gnome flatpak Solitaire
Ankehitriny mba hampandeha azy dia ilaina ny manokatra azy amin'ny, ny fanombohana voalohany dia naharitra fotoana fohy hanombohana, fa ireto manaraka ireto dia niaraka tamin'izay.
flatpak mihazakazaka org.gnome.Aisleriot
Farafaharatsiny ho ahy, na dia mbola betsaka aza ny programa tsy hita satria ampiasain'izy ireo hamoahana ny programa misy azy ireo no iray amin'ireo tsara indrindra.
Ny mpifaninana amin'i Flatpak, ilay eo am-pelatanan'ny Canonical, ankahalan'ny maro ary tian'ny vitsy, farafaharatsiny amiko tsy safidy hafa amin'ny lohatenin'ny paositra, ny tsy fitovizan'ny Linux.
Tsy hiresaka amin'ny antsipiriany momba an'io lohahevitra io aho.
Mihamanakaiky kokoa hatrany izahay amin'ny fitondrana ny mpampiasa rehetra fomba tsotra hametrahana rindranasa ao amin'ny Linux, saingy zavatra iray no nametrahako ny lohateny hoe utopian satria na dia akaiky dia akaiky izahay ary manana fitaovana, ny vondrom-piarahamonina GNU / Linux dia nikarakara ny famindrana anay. lavitra azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny utopia ny fampitambarana ao amin'ny Linux
Miandry ny mpizara voalohany izay mihevitra fa manana fonosana 100% amin'ny erposany.
Manjaro miaraka amin'i Gnome mampiasa rindrambaiko Gnome dia tena mahay mitantana fanavaozana, efa ela aho no tsy nihazakazaka anao -No -onfidinao
Tsy fantatro ny fomba firesaka teknika azy io, na dia tsy maintsy atao aza izany.
Efa ela aho no niaraka tamin'i Ubuntu ka tsy tadidiko intsony hoe inona izany hoe manandrana fizarana bebe kokoa izany.
Tsy dia tiako loatra ny Gnome Shell, fa ho an'ny tsiro loko foana.
eddie berrios dia hoy izy:
Andriamatoa malala, mahafinaritra tokoa ny manana olona toa anao izay mampianatra sy manazava anay.tsy an-danin'izany, nandritra ny 10 taona teo ho eo niarahako niasa tamin'ny Linux, dia tsapako fa misy ny ezaka hanasarotana kokoa ilay sarotra. Ohatra, ity rafitra Appimages ity dia toa hevitra tsara ho ahy; Fa ny fisintomana programa fotsiny dia tsy vitan'ny sakana amin'ny fiteny, izay azo resahina, fa, aiza ny bokotra fampidinana tsotra?. Marina izany amin'ny farany ataonao Nefa tsy maintsy apetrakao amin'ny tena izy! Inona no antony anaovanao an'io? Misy ny mivoaka miaraka amin'ny fanaporofoan-kevitra hoe satria manery anao hianatra sns .. fa ahoana raha tsy tiako izany? Sa raha vao vaovao aho ?.. Ary ity karazana fiheverana heveriko fa misy tanjona ity dia hisorohana ny Linux sy ny fandraisana andraikitra tsy hanatratra ny sarambaben'ny olombelona. Saingy averiko ihany fa tsy maintsy misy tanjona vitsivitsy: Afa-po ny ego sy ny fiheverana "an'ireo izay mahalala »Ary arovy ny fandraisana andraikitra ataon'ny orinasa. Mazava ho azy fa fanehoan-kevitra fotsiny izany. Miarahaba anao ary misaotra anao nanampy ny tsy fahalalana eto ambany.
Mamaly an'i eddie Berrios
Toy izany koa, 10 taona no nijanonako tao amin'ny Linux, nianatra zavatra betsaka na somary kely aho raha oharina amin'ireo gurus solosaina, nefa dia ampy izay.
Misaotra betsaka noho ny hevitra mahasoa, manaova fety.
Milaza aho fa noho ny antony ego dia bebe kokoa noho ny antony lehibe kokoa ary antsoina hoe "fahalalahana." Tsy misy ny fahalalahana tsy misy andraikitra sy fahaleovan-tena, izany no antony anerena anao hianatra ao amin'ny Linux satria ny ampahany amin'izany fahalalahana izany dia miaraka amin'ny fahalalana fahalalana ny fomba hitondrana andraikitra amin'ny fampiasana ny OS-nao sy ny fomba fiasa hahazoana fahaleovan-tena. Ny zava-mitranga dia ny politikan'ny microsoft sy ny paoma dia ny fanesorana an'io fahalalana io ary amin'izay dia mora kokoa ny manodikodina ary mahatonga antsika hiantehitra bebe kokoa amin'ny "vahaolana" ataon'izy ireo satria arakaraky ny tsy fahafantarantsika azy, dia mora kokoa ny mivarotra antsika ny "vahaolana" ho zavatra vaovao na zavatra ilaintsika satria Nahazatra azy ireo ny mametraka vahaolana amin'ny olantsika, izay matetika tsy dia tian'izy ireo loatra ho anay mpampiasa. Fa araka ny filazan'izy ireo ao amin'ny taniko hoe "izay tsy mahalala dia toy izay tsy mahita" izany hoe, ny tiany holazaina dia ny mino na mitelina izay lazain'izy ireo noho izy neophyte an'ny lohahevitra, izay somary sarotra kokoa mijaly aho amin'ny linux.
Ala, miaraka amina mpivady, ary tsy mamakafaka faingana. Tsy misy ifandraisany mihitsy ity lahatsoratra ity ka mamela iray amin'ireo fonosana tsara indrindra. Raha fintinina, raha tsy misy dia tsy azo esorina.
Ny fialana tampoka fotsiny noho ny tsy fitiavanao azy dia tsy midika hoe tsy safidy "confgence" izany fa manontania manjaro na solus fotsiny. Avia, tsy afaka mandray olana ara-teknolojia ianao amin'ny fiheverana ny fanatisme amin'ny fivavahana. Toa fahatezerana manohitra ny kanônika izany.
Mampiasa ny Ubuntu ho hany Operating System amin'ny solosaiko aho.
Fanatisma, kely, fa navelako mba hijerenareo zalahy.
Raha te hametraka zavatra amin'ny snap ianao dia ilaina ny mametraka ao amin'ny Ubuntu
ary hanaovana fitsapana
sudo snap hametraka hexchat
snap mihazakazaka hexchat
Mila manampy an'io amin'ny lahatsoratra fotsiny aho.
Miaraka amin'ny sariny avy.
Mr. Robot dia hoy izy:
Namana. Azonao atao ny milaza fa kely ny zavatra novakianao momba ny snap. Izy io dia miasa amin'ny fizarana rehetra. Amin'ny Linux Files dia tsy manana olana amin'ny fampiasana azy aho ary mihevitra azy io ho safidy matotra sy feno kokoa noho ny flatpack.
Valio Andriamatoa Robot
Tena tsy dia fantatro loatra ny momba ny Snap.
Mieritreritra aho fa diso hevitra ianao maninona no manazava fa tsy maintsy mametraka snapd ianao?
snapd dia efa napetraka ao amin'ny kinovan'ny Ubuntu ankehitriny.
Valiny amin'i Vampire
Miala tsiny, fa tena tsy heveriko fa ny "fampiraisana" dia hevitra mety.
Ny tanjaka sy ny fahalemena goavan'ny GNU / Linux dia ny fanahiny "anarchist", samy manana ny heviny ny tsirairay ary mampivelatra azy ireo hatramin'ny farany azo atao, izay raha ny fahitako azy dia tsara.
Ary farany, karazan-pantheon lehibe no foronina amin'ny fizarana izay miasa amin'ny fomba tena hafa sy miaraka amin'ny fotoana, tsikelikely karazana "fifantina voajanahary" no namboarina izay ny hevitra tsara indrindra dia ireo izay mitohy.
Raha ny amiko dia mieritreritra aho fa ny rafitra fonosana Guix GNU / Linux dia tena mahaliana ary angamba raha mandresy korontana izy, fizarana maro no hahazo hevitra avy amin'izany ho an'ny rafitra fitantanana fonosana.
Ho an'ny ambiny, ny fahasamihafana iray ihany dia manome fiarovana lehibe kokoa (virtoaly bebe kokoa noho ny tena izy), satria miankina amin'ny fanafihana, fizarana manokana no tsy maintsy dinihina, izay mametra ny fari-pahalehiben'ny "fahombiazany"
Noho io antony io, araka ny hevitro ny rafitry ny fitantanana fonosana dia tsara ary mampitambatra azy ireo dia tsy utopia.
Inona koa, ireo mpampiasa "normal" dia tsy miraharaha izany akory. Ny karazana interface interface "App Store" fotsiny dia ampy hametrahana rindranasa. Ny fomba fiasan'ny fizarana anatiny ireo fonosana dia tsy zavatra mahaliana azy ireo.
Raha ny marina, tiako ny bilaoginao, misy zavatra mahaliana maro ao.
Enga anie ka hisy tranokala bebe kokoa toa izao,
Azoko lazaina fa oasis izy ireo ao amin'ny bilaogy informatika sy teknolojia solosaina amin'ny teny espaniola.
Hevitra tsara na hevi-dratsy, araka ny voalazanao, ny fifantenana voajanahary dia hilaza amintsika ao anatin'ny taona vitsivitsy ny niafaran'izany rehetra izany.
Manaova fety mahafinaritra.
Inona no hitranga amin'ireo distros izay mampiasa kaody loharano, toy ny Gentoo Linux, raha toa ka tratra ny utopia?
Raha izany dia tsy mieritreritra aho fa ny fizarana amin'izao fotoana izao dia hijanona tsy hanavao intsony hanana izany maodely fizarana rindrambaiko izany.
Mandeha amin'ny tranokalan'ny Flatpak aho ary misy toy ny fampiharana 5, dia izay ihany ve?
mitsidika an'i Flathub
Ny hevitra dia mitovy amin'ny fomba fiasan'ny fampiharana amin'ny macOS. A .app folder miaraka amin'izay ilaina rehetra ilaina amin'ny fampiharana, raha ny tokony ho izy nefa tsy misy mpampiditra.
Araka ny nolazaiko hatrany (ary manelingelina ahy kely izany), Apple no fahavalon'ny lozisialy maimaim-poana (mihoatra ny sahin'ny Microsoft hoy aho), ho an'ny rehetra, afa-tsy rehefa mandika hevitra sy fampiharana.
Saingy tsy nalain'izy ireo ny hevitry ny rindranasa mitokana, satria izany no izy tao amin'ny OX hatrany am-piandohana, ankoatr'izay, amin'ny OSX dia afaka mampiasa repositories toy ny amin'ny linux ianao, jereo ny homebre, macports (mitovy amin'ny port BSD na portage Gentoo ). Mpampiasa Linux nandritra ny 20 taona mahery aho, hatramin'ny nahatongavako tany Etazonia dia miasa irery amin'ny OSX aho, inona no holazaiko aminao, ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa, satria ny OSX amin'ny fotony dia BSD novaina. Amin'ny mpizara dia mbola mampiasa linux ihany aho, fa ho an'ny toeram-piasako, tsy misy tsara noho OSX. Ny terminal tsara indrindra hitako hatreto, iTerm2, tsy misy mitovitovy lavitra amin'ny linux, kopia ratsy fotsiny, saika mitovy baiko ihany, azonao atao ny manao ny zavatra rehetra amin'ny alàlan'ny console raha tianao, nefa miaraka amin'izay dia tsy esorin'izy ireo ny fahatsoran'ny UI. Ho famaranana, raha mila tsindrio tsindrio tsindrio ianao dia manana izany, raha mila tambajotra sary mihoatra ny azy rehetra ianao dia manana izany, fa raha te hiasa ao amin'ny console ianao araka izay nokendren'Andriamanitra dia manana izany koa ianao. Tsy misy zavatra NORMAL ataonao ao amin'ny Linux izay tsy azonao atao amin'ny OSX, ary minoa ahy, araka ny nolazaiko anao tany am-piandohana, efa 20 taona mahery aho no nampiasa Linux ho mpandrafitra fandaharana matihanina (efa nanao mpamily mihitsy aza aho), toy ny mpitantana sy mpampiasa mahazatra, mitovy ihany miaraka am-baravarankely ary ankehitriny 5 taona mampiasa OSX, heveriko fa manana traikefa ampy hampitahana aho. Toy izany koa amin'ny iOS sy Android, andriamanitra amin'ny iOS ny fandaharana raha oharina amin'ny Android. Na izany na tsy izany, Linux dia tokony hampihatra filozofia OSX ihany, tsotra be ho an'ny mpampiasa mahazatra fa raha te hisintona ianao dia avelao ny tenanao hidina ary hanao izay tianao.
Ny olana amin'ny fampiasana an'io amin'ny ankapobeny sy amin'ny programa rehetra dia ny fiverenantsika amin'ny Linux Windows izay misy ny programa miankina aminy fa tsy ny fiankinan-doha rehetra dia ao anaty lahatahiry / lib ihany, ankoatry ny habaka goavambe dia hipetraka amin'ny mpizara sy solosaina, Fenonay fiankinan-doha amin'ny endriny Windows madio indrindra ny solosaina, misavoritaka daholo, andao hanao veloma ny lahatahiry mirindra sy manara-penitra / lib, maro amin'ireo fiankinan-doha ireo no hiafara (ho sarotra tokoa ny hitazomana ireo rehetra ireo) ary hanao ataovy mora tohina ny solosaintsika.
Amin'ny maha vahaolana vonjimaika sy vonjy maika dia hitako tsara ireo rafitra ireo, saingy amin'ny maha vahaolana ankapobeny ahy dia tsy hitako ireo rafitra fonosana marina izay manatevin-daharana ireo programa miaraka amin'ireo fiankinan-doha.
Ny andian-jiolahy manaraka